भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिदै, युपी, हरियाणामा स्कुल कलेज बन्द ! – Sagarmatha Online News Portal
भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिदै, युपी, हरियाणामा स्कुल कलेज बन्द !
गुगलका कर्मचारी कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् । भारतको बैंगोलोर कार्यालयमा कार्यरत गुगल सर्च इञ्जिनका एक कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुटि भएको छ ।
गुगल बैंग्लोरले बयान दिँदै भनेको छ, ‘हामीले यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण भएको थाहा पाएपछि उनलाई छुट्टै आइशोलेशनमा राखेका छांै । उसको स्वास्थ्यमा पुरै निगरानी बढाउन भनेका छौँ । सहकर्मीसँग कुराकानी गर्न दिएका छैनांै ।’
यस्तै भारतीय सेनाको मानेसरस्थित विशेष वार्डमा रहेका १ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । ११ मार्चमा इटालीबाट आएका उक्त व्यक्तिलाई चेकजाँच गर्दा उच्च ज्वरो आएको थियो । उनी १४ वर्षदेखि इटालीको एउटा स्टोरमा कार्यरत थिए ।
यसका साथै सेनाका सबै भर्ना केन्द्रहरुमा एक महिनाको लागि भर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । सेनाका जवानहरुलाई आवश्यक कार्यका लागि मात्र बाहिर जाने अनुमति दिइएको छ भने भिडियो कन्फेरेन्सको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै युपीमा कोरोना भाइरसका कारण उत्तर प्रदेश सरकारले माहामारीको घोषणा गरेका छन् । यस्तै प्रदेशका सबै स्कुल तथा कलेज २२ मार्चसम्मको लागि बन्द गरिएको छ । तर जुन स्कुलमा परीक्षा चलिरहेको छ,उक्त स्कुलको परीक्षा सक्किने बित्तिकै बन्द गरिने प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
Published On: ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार